Madaxwayne Farmaajo Xukunka Lawareegay |
Madaxwayne Farmaajo Xukunka Lawareegay
Sawir muujinaya biseylka siyaasadeed ee Dimuqraadiyadda uu Dalkeennu gaaray, Soomaaliyeey aan u mahad celinno Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aanna u duceyno Madaxweynaha cusub in uu Alle la garab galo xilka.
Shacab sida Soomaalida oo kale muddo dhèer ku soo jiray qas iyo qalaanqal siyaadeed oo salka ku hayay xukun qori lagu raadinayay ayay mico weyn u sameyneysa labo Madaxweyne oo xilka isku wareejinaya si wanaagsan.
Madaxweynihi hore ee DFKG XSM waxa uu calanka iyo xafiisiiba ku wareejiyay Madaxweynaha la doortay Mohamed Farmaajo maanta .
Labada hogaamiye ee xilka la kala wareegayay mid walba waxaa hadalkiisa ku jirtay maanta waa maalin taariikhi u ah shacabka Soomaaliyeed runtii waa arin ammaan mudan , yaanan ku mashquulin quluubtooda ee aan xukminno waxa inoo muuqda Allah kaliya ayaa qalbiyda daalacda.
Shalay hadii ay jirtay cid caayeysay madaxweynihii hore ama nac u qabtay aan ka gudubno , waxa uu naga mudan yahay qadarin maanta si kasta oo uu xukunkiisu ahaa, wanaagga maanta dhacay aan ka qabanno dhabtii waa oday Soomaaliyeed .Dalka horey u socdo .
Waa dhacdo aanan ka suuragalin dalal qaaraddeena ku yaalla. Xumaan saadis yaanan noqon ee dalka baaba’ay wanaag haloo rajeeyo Madaxweynaha cusubna hala shaqeeyo.